JINGYE Ukuxuba Tank kuyinto isitsha sokugcina izinto nokuxuba. Kwenziwe ngokwezindinganiso eziqinile zomkhakha, I-JINGYE Mixing Tank ine dalad inani lamakhasimende ethu. Ithangi lethu lokuxuba liyakhonzas izimboni ezahlukahlukene kanye thina babe nesipiliyoni esinothile ekukhiqizeni&ukwakheka. Noma ngabe udingaengeza ikhava ye- i-vacuum noma ingcindezi inqubo, engeza ijakhethi ukupholisa noma Ukushisa, engeza umxube wokumisa noma ukusabalalisa, ithangi lethu lingahle lenzelwe ukuqinisekisa ukuthi inqubo yakho yokucubungula ihamba kahle.
I-JINGYE Mixing Tank yenziwa ngensimbi engagqwali, esetshenziswa kakhulu ku:
1. Imboni yokudla nesiphuzo, efana nojamu, utamatisi isoso, unama, ubisi, iziphuzo, iwayini, amanzi okuphuza, njll.
2. Imboni Yamakhemikhali Yansuku zonke, njenge-lotion yesikhumba, imoto, ukhilimu womzimba, njll
Okuphathekayo: SUS304 / 316L;
Uhlobo lokushisa: ugesi, umusi;
Izidingo 6.Customization zamukelekile;
1.Adopt ukudla grade impahla futhi izesekeli sanitary, musa ukugqwala, ukuqinisekisa ukukhiqizwa ukuphepha.
I-2.Ingaxhunyaniswa ngamapayipi nama-valve, ngebhokisi lokulawula le-PLC elizenzakalelayo, ukubona ukusebenza okuzenzakalelayo kwenqubo yokukhiqiza, gcina izindleko zabasebenzi, ukuthuthukisa amandla wokukhiqiza, nenzuzo kumakhasimende
Design lokushisa (L)
Ijubane elishukumisayo (ngomzuzu)
Singakwazi ukwenza ngokwezifiso imishini ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Langaphambilini Ukubuyisela emuva inzalo